Xulka Gobolka Saaxil Oo Markii Ugu Horaysay Finalka Ciyaaraha Gobolada Somaliland Balan Kaga Samaystay Xulka Gobolka Awdal, Xili Riyadii Daad-Madheedh Ay Saaxil Rekoodhayaal Ku Burburisay |
Xulka Gobolka Saaxil Oo Markii Ugu Horaysay Finalka Ciyaaraha Gobolada Somaliland Balan Kaga Samaystay Xulka Gobolka Awdal, Xili Riyadii Daad-Madheedh Ay Saaxil Rekoodhayaal Ku Burburisay
Waxaa galabta la soo gabagabeeyay wareega afar dhamaadka ciyaaraha gobolada Somaliland ee ka socday Hargaysa Stadium waxaana martii taariikhda ciyaaraha gobolada Somaliland ugu horaysay finalka iska xaadiriyay xulka gobolka Saaxil kadib markii rekoodhayaal ku garaaceen xulka gobolka Daad-Madheedh.
Kulankan ayaa waqtigii rasmiga ahaa ee 90 ka daqiiqo ay labada xul gobol ku kala bixi waayeen si la mid ah kulankii shalay ay Awdal ku reebtay Gabiley. Kulamadii afar dhamaadka ciyaarta Gobolada Somailand ayaa noqtay kuwo adkaatay isla markaana ay wax gool ah layskaga dhalin waqtigii rasmiga ahaa iyada oo labadii kulanba lagu kala baxay rekoodhayaal.
Xulka gobolka Daad-Madheedh oo dariiq adag u soo maray in uu soo gaadho afar dhamaadka ciyaaraha Gobolada Somaliland ayuu nasiibku diiday in ay u soo gudbaan finalka kadib markii labadii rekoodhe ee ugu horeeyayba ay niyad jab kala kulmeen oo ay qasaariyeen, halka xulka Saaxil oo sanadkan si cajiib ah u soo diyaar garoobay ay ka faa’iidaysteen fursada dahabiga ah ee ay sanadkan heleen.
Waxaa muhiim ah in sanadkan uu koobka gobolada Somaliland ku guulaysan doono xul aan abid koobkan soo qaadin iyada oo finalka ay iskaga hor iman doonaan xulalka gobolada Awdal iyo Saaxil laakiin Awdal ayaan markii labaad soo gaadhay kulanka kama danbaysta ciyaaraha gobolada Somaliland balse ilaa hadda koobkan dhagaha may qaban.
Kulanka finalka ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa la ciyaari doonaa sabtida iyada oo barri oo jimce ah la nasan doono waxaananu u hambalyaynaynaa xulka gobolka Saaxil oo xulka Gobolka Awdal oo hambalyadiisa aan shalay u dirnay Hargaysa Stadium ay ku kala calaf qaadi doonaan Sabtida.
Waxa kale oo aan marnaba la ilaawi karin dadaalkii cajiibka ahaa ee uu sameeyay xulka gobolka Daad-Madheedh oo la odhan karo nadiibka ayaa ka hiiliyay marka la eego wixii ay Hargaysa Stadium ku soo bandhigeen intii uu tartanku socday iyo waliba Saaxil oo sanadkan soo qaadatay.
Xaqiiqdii waa kulan si wayn loo sugayo isla markaana xiiso gaar ah u leh dhamaan inta xiisaysa kubbada cagta gaar ahaan gobolada Saaxil iyo Awdal oo ku hamiyaya in ay markii ugu horaysay koobkan ka dejijaan Berbera ama Boorama, waxaanan sugi doonaa cida ay guushu raaci doonto balse waxaan hubaal ah in uu noqon doono kulan adag oo si wayn loogu diyaar garoobi doono. Waa Mahamoud Batalaale iyo asxaabtiisa Laacib.net oo idin leh waa in oo sabtida insha Allah iyo finalka Awdal vs Saaxil.